36 Ndị isi nke ndị bụ́ nna n’ezinụlọ ụmụ Gilied nwa Mekia+ nwa Manase, ndị si n’ezinụlọ ụmụ Josef, wee bịa gwa Mozis na ndị isi, bụ́ ndị isi nke ndị bụ́ nna n’ụmụ Izrel, 2 sị: “Jehova nyere onyenwe m iwu ka o site n’ife nza+ nye ụmụ Izrel ala ha ga-enweta; Jehova nyekwara onyenwe m iwu ka o were ihe nketa Zelofehad nwanne anyị nwoke nye ụmụ ya ndị inyom.+ 3 Ọ bụrụ na onye ọ bụla n’ime ụmụ ndị ikom si n’ebo ọzọ n’etiti ụmụ Izrel alụọ ha, a ga-agụpụ ihe nketa ndị inyom ahụ n’ihe nketa ndị nna anyị wee gbakwụnye ya n’ihe nketa nke ebo ha ga-alakwuru, e wee gụpụ ya n’ihe nketa anyị nwetara.+ 4 Mgbe afọ Jubili+ ụmụ Izrel ga-eru, a ga-agbakwụnyekwa ihe nketa ndị inyom a n’ihe nketa ebo ha lakwuuru; e wee gụpụ ihe nketa ha n’ihe nketa nke ebo ndị nna anyị.” 5 Jehova wee gwa Mozis ka o nye ụmụ Izrel iwu, sị: “Ihe ebo ụmụ Josef kwuru ziri ezi. 6 Nke a bụ ihe Jehova nyere n’iwu maka ụmụ Zelofehad,+ sị, ‘Onye ọ bụla masịrị ha ga-alụrụ ha. Kama ọ bụ n’ezinụlọ dị n’ebo nna ha ka ha ga-alụ di.+ 7 Ọ dịghịkwa ihe nketa ụmụ Izrel nke ga-esi n’otu ebo gafeere ebo ọzọ, n’ihi na onye ọ bụla n’ime ụmụ Izrel ga-ebi n’ala nke ebo nna nna ya hà ketara. 8 Nwaanyị ọ bụla nke nwetara ihe nketa n’ebo ụmụ Izrel ga-alụ+ onye si n’otu n’ime ezinụlọ nke ebo nna ya, ka onye ọ bụla n’ime ụmụ Izrel wee nweta ihe nketa nna nna ya hà. 9 Ihe nketa ọ bụla ekwesịghị isi n’otu ebo gafeere ebo ọzọ, n’ihi na ebo nke ọ bụla n’ebo ụmụ Izrel kwesịrị ịnọgide n’ala o ketara.’” 10 Dị nnọọ ka Jehova nyere Mozis n’iwu, otú ahụ ka ụmụ Zelofehad mere.+ 11 Mala, Teza na Họgla na Milka na Noa, bụ́ ụmụ Zelofehad,+ wee lụọ di, ọ bụ ụmụ nke ụmụnne nna ha lụrụ ha. 12 Ọ bụ ụfọdụ n’ime ndị si n’ezinụlọ ụmụ Manase nwa Josef lụrụ ha, ka ihe nketa ha wee dịgide n’ebo ezinụlọ nna ha. 13 Ndị a bụ iwu+ na mkpebi ikpe Jehova nyere ụmụ Izrel site n’ọnụ Mozis na mbara ọzara Moab nke dị n’akụkụ Jọdan, n’ebe dị nso na Jeriko.+